ITIL: घटना व्यवस्थापन र समस्या व्यवस्थापन बीचको भिन्नता
ITIL: घटना प्रबंधन र समस्या प्रबंधन को बीच अंतर
ITIL कसरी समस्या र घटनाहरुलाई फरक पार्छ
ITIL मा एक घटना के हो?
ITIL मा एक समस्या के छ?
ITIL मा घटनाहरु र समस्याहरु को बीच सम्बन्ध के छ?
आईटीआईएल घटनाहरु र समस्याहरु को बीच किन फरक छ?
कसरीआईटीआईएलले समस्या र घटनाहरूलाई फरक पार्छ
ITIL® फाउण्डेसन कक्षाहरूमा बुझाइ प्रायः सोच्न सकिन्छ कि यसको परीक्षण र समस्याहरू बीच फरक हुन। यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र रोशन प्रदान गर्न यो ब्लगले घटनाहरू र समस्याहरू बीचको विवाद भेद गर्नेछ, कसरी तिनीहरू जोडिएको छ, र किन यो फरक बनाउँछ।
ITIL द्वारा संकेतित रूपमा, एक एपिसोड एक सेवा वा एक प्रकृति को प्रकृति मा एक बहस को लागि अचानक घुसपैठ हो। सेवा स्तर सम्झौता (SLA) बिच्छेदन गरिसकेपछि चाहे घटनाको रूपमा केहि चीज को प्रायः निर्णय गरिन्छ। हुनसक्छ कि यो हुन सक्छ, आईटीआईएलले पनि एसएलए भन्दा पहिले एक घटना बढाएर ध्यानमा राखेको छ किनकि कारावासको बिन्दु वा प्रभावको प्रत्याशित हुन्छ।
तहमानका सर्तहरूमा, एक एपिसोड ब्ल्याक आउटको चित्र हो।
आईटीआईएल द्वारा संकेत को रूप मा, एक समस्या कम से कम एक एपिसोड को मूल स्रोत हो। समस्याहरू कम्तिमा एक घटनाको लाइटमा ल्याउन सकिन्छ, वा तिनीहरू तुलनात्मक एपिसोडको उपस्थिति बिना उठ्न सकिन्छ।
लेवनका सर्तहरूमा, समस्या समस्या वा सम्भावित कारण वा कम से कम एक ब्लैकआउटको चित्रण हो।
नियमको रूपमा, दुवै बीचको सम्बन्ध भनेको हो कि एक समस्या कम्तीमा एक घटनाको कारण हो। कुनै पनि मामला मा, यो एक घटना (या एपिसोड को एकत्र) को लागि कल्पना गर्न को लागी एक देखि अधिक समस्या द्वारा बनाईएको छ।
घटनाहरु र समस्याहरु को पहिचान को उद्देश्य एक अलग परिस्थिति र अन्त परिणाम को रूप मा एक नै छ। समस्याहरू हुन्, र एपिसोडहरू प्रभाव हुन्।
आईटीआईएलले यी चीजहरूलाई यो तथ्य बुझ्न आग्रह गर्दछ कि यी दुई पटक प्रायः उपचार गरिन्छ र अप्रत्याशित तरिकामा बसेको हुन्छ। एक प्रकरण को आधार मा मूल रूप देखि लागू गर्दछ कि जो केहि सेवा प्रभावित भएको थियो संयोग देखि पुनर्स्थापित गरिएको छ। यो घटनाले चाँडै दोहोर्याउन वा पछि दोहोरिने छैन भन्ने संकेत गर्दैन। जब म "संयोगमा" भन्छु, सम्झनुहोस् कि एक पल वा 10 वर्षको मतलब हुन सक्छ। मुद्दाको तथ्य यो हो कि एक एपिसोडको एक दृष्टान्त परिवर्तनहीन छैन।
समस्याहरू, कुनै पनि अवस्थामा, घटनाहरूको कारण हो। हामी समस्याको मूल स्रोत भेद गर्न विशिष्ट तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं र अन्तमा यो समस्या समाधान गर्न सक्दछौं। बिन्दुमा जब एक दृष्टान्त हुन्छ, परिवर्तन परिवर्तनलाई तथ्यको प्रकाशमा पराजित गरिएको छ जुन मूल स्रोतहरूमा झुन्ड्याउँछ प्रायः खतराको केही उपाय समावेश गर्दछ।
शक्तिशाली घटना व्यवस्थापनको गारंटी दिन्छ कि सेवा आपूर्तिकर्ताको रूपमा तपाईं आफ्नो एसएलएमा भएका ग्यारेन्टीहरू राख्न सक्नुहुनेछ जुन प्रणालीको आधारमा छिटो पुन: सेवा गर्न प्रणाली प्रदान गरेर। समस्या व्यवस्थापनले तपाईंलाई सेवा सप्लायरको रूपमा गम्भीर रूपमा घटनाहरूमा प्रतिक्रिया गर्न सक्ने लक्ष्यको साथ प्रतिक्रिया गर्न सक्दछ जुन तिनीहरूले दोहोर्याउन नसक्ने र सक्रिय रूपमा एपिसोडहरू हुन सक्दछन्।
यी पृथक प्रक्रियाहरू छन् किनभने तिनीहरू नियमित रूपमा विविध योग्यता सेटहरू र अभ्यासहरू आवश्यक हुन्छन्। असुरक्षित प्रबंधनले समस्यालाई व्यवस्थापन एपिसोडहरूको मूल स्रोतहरू मार्न आवश्यक भए तापनि सेटअप भएका कुनै पनि SLA अनुसार चाँडै सेवा पुन: ताजा गर्न आवश्यक छ। केहि अवस्थाहरूमा कानूनी रूपमा समस्या समाधान गर्न, एक सेवा आपूर्तिकर्ताले अवस्थित ब्ल्याक आउटको बारेमा विस्तार गर्न वा विस्तार गर्नुपर्छ।
समझदारी समस्या प्रबंधन प्रक्रिया र रणनीतिहरु लाई उनको विशेष कार्य वातावरण को मुकदमा देखने को लागी हाम्रो मास्टरिंग समस्या प्रबंधन पाठ्यक्रम मा। यो गैर-पुष्टि, कार्य बाहिर संचालित सिक्ने दृष्टिकोणले सिकाउने योग्य आईटीआईएल आवेदनको लागि वेतनकर्ताहरूले उनीहरूको आवश्यकतालाई दिन्छ।
ITIL परिचालन समर्थन र विश्लेषण
किन प्रोजेक्ट प्रबन्धकको लागि पीएमपी प्रमाणिकरण आवश्यक छ?